Faran'ny famitana | Serivisy famaranana Prototype aotobisy - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
SERVICE / Faran'ny famaranana
Manomboka amin'ny maodely hita maso ka hatrany amin'ny sampana famokarana farany, ny mpanao maodelintsika mahay dia afaka mamaly akaiky ny takian'ny mpanjifa momba ny loko sy ny famaranana isaky ny mandeha. CeateProto dia manolotra serivisy famaranana trano sy fanaovana hosodoko feno. Hanome vahaolana mety sy manokana momba anao izahay
Famaranana kalitao manokana - Serivisy prototype tokana
Ny fanaovana prototype dia mitovy amin'ny fizotry ny famokarana. Raha vantany vao mivoaka ny masinina — mpanonta 3D na milina CNC nentim-paharazana dia hanana endrika sy marika milina tsy manam-paharoa izy io. Rehefa manelingelina ny fampiharana anefa ny firafitra dia tsy maintsy hatsaraina na esorina amin'ny tampon'ilay ampahany. Midika izany fa raha te hahalala marina ny vokatrao farany ianao dia tsy maintsy miatrika dingana famaranana henjana ny prototype, izay mamaritra ny dingana farany takiana alohan'ny hamelomana ny vokatra iray tena izy.
Ny famoronana Prototype ao an-trano dia afaka manome ny farany vita tsara indrindra ao anatin'izany ny fanangonana & fametahana endrika, fametahana & fametahana metaly, fametahana sy famolahana, fanapoahana sy fanosehana, hosodoko ary fanontana. Manolotra karazana fitsaboana manokana eto an-toerana koa izahay, anisan'izany ny etching laser, anodizing, electroplating, chroming, famaranana simika, fonosana vovoka, sns. Mba hanomezana prototype nalaina tahaka haingana toy ny vokatra farany ho an'ny mpanjifa, manohana ambonin-tokana izahay famitana ny asany ho an'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
CreateProto dia manana rafitra aorian'ny famaranana mifandraika amin'ny filanao isan-karazany. Teknolojia efa za-draharaha sy 20 taona mahery no manome toky anao ny amin'ny loko, endrika na famirapiratan'ny ampahany ary hahatratra ny antenainao. Zahao ny safidintsika vita sy ny fanodinana ambaratonga faharoa hahitana ny vahaolana, na mifandraisa amin'ny iray amin'ireo injenieran'ny tetikasa natokana ho anay, dia hahita ny vahaolana tsara sy mety aminao izahay.
Famaranana tanana & Form Fit Function
Manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fametahana, famenoana, fanovana, fametahana mialoha, fandrefesana ary fanangonana, ireo manampahaizana momba ny asa tanana dia mifantoka amin'ny antsipirian'ny injeniera sy ny famaritana ny endrika, manampy ny mpamorona haneho ny fahaizany mamorona.
Ny lafiny iraisana amin'ny famaranana ny maodely dia ny fampidirana tsindrona na fivoriambe miasa. Ohatra, ny fampidirana sisin-kofehy vy dia mamela kofehy mateza kokoa raha toa ka mitaky visy na kofehy ny zavatra iray amin'ny fizotran'ny fivoriambe. Matetika, ny famaranana dia noforonina tao-trano, fa ny ekipanay dia afaka miara-miasa amin'ireo mpamatsy entana omena ihany koa hamita sy hivory araka izay ilaina.
Ao amin'ny Createproto, ny ekipanay dia hanampy amin'ny fandresena ny fanamby rehetra amin'ny sakana enjeniera, hanolotra vahaolana ary hahatratra tetikasa vita. Miezaka foana izahay hahalavorary ny lafiny rehetra amin'ny tetikasa rehetra.
Betsaka ny fomba fanesorana ny marika milina, na izany aza, raha tsy voadinika tsara ny fizotrany, dia mety hampihena mora foana ny fandeferan'ny ampahany izany ary ho reraka amin'ny antsipiriany lehibe. Ka rehefa misy ampahany manakiana na takiana amin'ny fandeferana dia tsara kokoa ny mitodika any amin'ny matihanina. Createproto dia manala ny lesoka amin'ny vokatra toy ny burr, ny tsipika milina ary ny marika amin'ny adhesive avy amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny famolavolana sy famolavolana tanana mahomby sy manam-pahaizana momba ny famaranana prototype mahazatra.
Ny fitrandrahana tanana dia mila tanana mahay ary maharitra ora maro. Hihatsara ny fisaka amin'ny ampahany ary hihena ny fahamendrehana hahafahana mamorona endrika malama sy lavorary.
Ary ny fizotran'ny famolavolana tanana dia ampiasaina amin'ny famaranana fitaratra amin'ny plastika mahazatra, ny faritra vy ary ny faritra akrilika mazava, ary koa ny polycarbonate poloney etona mba hahatratrarana sehatra tsy misy valaka mitovy sy hamirapiratra ho an'ny matihanina ho an'ny famaranana ny prototypa, na hanatsarana ny fahazavana mazava amin'ny faritra mazava.
Na mila famitana milina, famaranana malefaka, famaranana mazava, poloney fitaratra, na fipoahana fasika ny tetikasanao, Createproto dia hanolotra anao ireo serivisy prototype tokana.
Fanosotra sy fanontana
Ny sary hosodoko dia fomba fiasa miasa lehibe indrindra ho an'ny loko farany sy ny endrik'ilay tetikasanao vokatra. Createproto dia manangona vola amin'ny loko madio mba hiantohana ny tsy fandotoana sy ny vovoka ho an'ny sary hosodoko ary hifehezana tanteraka ny hamandoana ao amin'ny efitrano fandokoana. Ny ekipan'ny sary hosodoko anay dia mampiasa basy marovava sy borosy rivotra miaraka amina teknolojia atomisation HVLP / LVLP avy amin'ny SATA, IWATA ary DeVilbiss. Ny coatings UV mahay sy ny akrilika 1K & 2K PU famonoana refinishing automotive avy amin'ny PPG sy DuPont dia manome prototypes sy faritra fanoherana rano fanampiny ary fanoherana simika, ary koa famaranana matihanina.
Ny UseProto dia matetika mampiasa ny Pantone Matching System sy ny RAL Classic System mba hifanaraka amin'ny loko mifangaro natokana ho an'ny kaody loko na ny volom-borona. Ho an'ny sary hosodoko misy loko roa na maro loko, dia manao saron-tava sahaza izahay ary mampiasa kasety hitazomana ny taditry ny sarontava ho madio sy hadio. Amin'ny masking, azontsika atao ny mizara ny singa amin'ny prototype monolithic anao ho famaranana maromaro ho an'ny fisehoana sarotra kokoa toa ny famolavolana 2K sy 3K.
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fisafidianana endrika dia ny fiantsoana endrika vita amin'ny Mould-Tech. Raha mila manampy endrika ilay prototypa izay mitovy amin'ny ampahany plastika vita amin'ny famokarana, azontsika atao ny mandoko ny firafitra ho an'ny volavolam-teknolojia bobongolo-teknika manokana hahatratrarana endrika sy fahatsapana irina. Raha mila malefaka mifandray ilay prototypot mba hitoviana amin'ny tahony tsy voafolaka loatra, azontsika atao ny manantanteraka azy amin'ny loko, ary ny vokany dia tsy mitovy amin'ny endrika ivelany fotsiny, fa tena amin'ny fihetseham-po koa.
UV Coating sy EMI Shielding
Ho an'ny fonosana azo ampiasaina, afaka mandeha mihoatra ny fampiharana tsotra isika mba hahazoana antoka fa afaka miasa tsara ny ampahany. Ny UV coating dia afaka manohitra ny taratra ultraviolet ary miaro ireo fitaovana ifotony hanatsarana ny mateza sy ny fanoherana na ny fanoherana ny volo. Miaraka amin'ny EMI, ny firakotra dia ampiasaina hiarovana na hahitana fitaovana elektronika avy amin'ny sahan'andriamby na fanelingelenana.
Fametahana laser & fanontana
CreateProto dia mahavita manao etching laser sy manonta amin'ny prototypes izay tsara hanamarihana ny vokatrao alohan'ny hifindrany amin'ny dingana famokarana betsaka amin'ny alàlan'ny fanandramana sy hamantarana ny toerana mety amin'ny logo misy ny marika na hafatra manokana. Laser etching dia maharitra ary tsy hosasana, hotetehina na ho reraka. Ny fanontana miloko feno dia misy ary koa ny fampifanarahana loko Pantone na RAL. Manome pirinty efijery izahay ho an'ny faritra fisaka sy pirinty ho an'ny vokatra tsy dia mahazatra.
Fitsaboana manokana ambonin'ny
Rehefa niitatra ny indostrian'ny prototyping dia mitovy amin'ny fitaovana azo ampiasaina hamokarana prototypes. Ny famaranana tsara dia afaka manisy fahasamihafana amin'ny fahombiazan'ny prototype, maodely na vokatra anao alohan'ny hirosoanao amin'ny sehatry ny famokarana. Miasa miaraka amina mpivarotra manam-pahaizana manam-pahaizana manokana i SelectProto hanome famaranana manokana izay matetika afaka manampy amin'ny fanatrarana ilay endrika tiana. Ity fiaraha-miasa ity dia mitaky famaranana manokana amin'ny sehatra vaovao, afaka mamaha olana sy manatsara ny famaritana ny vokatrao.
Ny famaranana ny prototype an'i CreatProto dia manolotra safidy maro karazana safidy fitsaboana manokana eto an-tany avy amin'ny mpiara-miasa azo antoka, toy ny fanodinana, fanodinana elektrôlika, famonoana chrome, famaranana simika, firakotra vovoka, sns. samy faritra vita amin'ny plastika sy vy.
Cnc Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana,